UGoogle ucacisa indlela uBusuku bobusuku bePixel obusebenza ngayo | I-Androidsis
Imowudi yobusuku engakholelekiyo "Ukujonga ebusuku" kweGoogle Pixel isebenza
El Imowudi yokujonga ebusuku, okanye imowudi yasebusuku, yeGoogle Pixel ifumene ihlombe loluntu ngeenyawo, ukuba yenye yezona zinto zixabisekileyo zinayo ikhamera kaGoogle ngoku. Uthotho lwezinto ezibetha ngokukhethekileyo kwiiPixels, nangona zikhona iindlela zokufikelela kuzo yeefowuni ezithile.
Kwiiyure ezimbalwa ezidlulileyo uGoogle uthathe ixesha lokuchaza indlela esebenza ngayo imo yasebusuku emangalisayo "Ukubona ebusuku" yeGoogle Pixel. Imowudi ekuvumela ukuba uthathe imifanekiso xa iimeko zokukhanyisa zingalunganga ncam. Imowudi eya kuthi ifikelele kwizizukulwana ezintathu zePixel kwiintsuku ezizayo.
1 Kwabakho ke ukukhanya
2 Isebenza njani imowudi yasebusuku okanye uBusuku bobusuku bePixel
Kwabakho ke ukukhanya
Sele inikelwe iGoogle Pixel 3, omkhulu uG uqhayisa ngelithi indlela yobusuku es Uyakwazi ukuthatha imifanekiso emangalisayo ngaphandle kokusebenzisa ifleshi. Unike umzekelo ngokuthelekisa kwifowuni entsha ye-Apple, ethi yona ithathe elungileyo, kuba, ibinzana eligqibeleleyo, uthelekiso lunjengosuku nobusuku njengoko lunjalo.
UGoogle usicacisela kwibhlog yakhe ukuba isitshixo kwifoto elungileyo siyakuhlala sikhanya. Xa kurhatyela Iikhamera ziyakubuyisela ukungabikho kokukhanya ukufaka ukukhanya ngakumbi kunye nokwanda ubuntununtunu. Oko kuthetha ukuba sibona ukutya okuziinkozo kakhulu kunye nengxolo kwezi foto.
Ukunceda kulo mnqweno wokuthatha iifoto zasebusuku, ixesha elide ifleshi ibeyeyona nto ifanelekileyonjengoko isongeza ukukhanya kwimeko. Ekuphela kwento enezithintelo njengokubengezela okukhoyo kwabo bafaka efotweni okanye kwiindawo ezininzi ukusetyenziswa kweflash akuvumelekanga. Yitsho ukuba ifleshi inika kuphela ukukhanya kwizifundo eziphambili, ishiya bucala imeko-bume okanye izinto ezikude lee nokujolise kuko kwesidlo sangokuhlwa.
Uphando Ikwathetha ngee-tripods, ethi, ngokuzinzisa ikhamera, isivumele ukuba sibambe ukukhanya ngakumbi kwezo meko zimnyama kwiifoto zethu. Kodwa ke, ngubani ophethe i-tripod ehamba naye ukuthatha iifoto zasebusuku xa siphuma ebusuku. Enye yeziphene zabo, xa kufakwa ixesha elide, kukuba banokwazisa ukufiphala ekuhambeni kwezinto kwindawo.
Isebenza njani imowudi yasebusuku okanye uBusuku bobusuku bePixel
Imowudi yokujonga ebusuku yePixel isebenza ngendlela yokuba xa ucinezela iqhosha lokuvala, iya kuyikhathalela Linganisa intshukumo yezandla zendalo (exhaphake ukushukuma kancinci) kunye nokuba kungakanani ukuhamba okukhoyo kwindawo.
Ukuba iPixel izinzile kwaye imeko isathe cwaka, ukujonga ebusuku kuya kuthatha ixesha elininzi ukubamba ukukhanya ukunciphisa isixa sengxolo ekubanjweni. Ukuba iPixel ihamba okanye kukho inqaku lokunyakaza kwindawo, ukujonga ebusuku kuya kusebenzisa ukubonakaliswa okufutshane kwaye kubambe ukukhanya okuncinci ukunciphisa ukufiphala kwentshukumo.
Ukuba, nangasiphi na isizathu, umxholo okwindawo uhamba, le ndlela yokujonga ebusuku iya kuthi ukuziqhelanisa nokuthintela intshukumo encinci ekonakalisweni Ukubanjwa. Endaweni yokuthwebula ifoto engagxili kwaye eqaqambe kakhulu, i-Night SIght ithatha inani elilinganayo lokukhanya kwinani elikhulu lokudubula okuqhubekayo okumnyama, kodwa kubukhali kakhulu.
Inyathelo elilandelayo kukudibanisa ukuze ukujonga ebusuku yenza yonke imilingo kwaye akukho bumvu buvela intshukumo kunye nokuqaqamba ekubambeni. Okokugqibela siya kuba nefoto enokukhanya okuninzi kwaye kwangaxeshanye kucacile.
Okokugqibela, uGoogle ucebisa ukuba xa sithatha ifoto kwiimeko eziphantsi zokukhanya sisebenzisa le ndlela yobusuku. Itekhnoloji ethi sisoftware ngokupheleleyo kunye nokongezwa kwezi zibonelelo zintsha Uhlelo lokusebenza lwekhamera yeGoogle Pixel kwaye besele sincokola ngeloxesha.
Ke sele uyazi indlela imo yasebusuku yeGoogle Pixel isebenza ngayo kwaye ungayisebenzisa njani ukuthatha iifoto ezingcono. Kucacile ukuba ngubani ngoku inkosi yokufota kwiselfowuni.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Ukusetyenziswa kwe-Android » Imowudi yobusuku engakholelekiyo "Ukujonga ebusuku" kweGoogle Pixel isebenza